TRUESTORY: Facebook တွင် ဓာတ်ပုံတင်သူများ သတိထားပါ(Facebook သုံးသူတိုင်းဖတ်ရန်)
Facebook တွင် ဓာတ်ပုံတင်သူများ သတိထားပါ(Facebook သုံးသူတိုင်းဖတ်ရန်)
ဒီ ရက်ပိုင်းမှာ ကျွန်တော့် သူငယ် ချင်း နှစ်ယောက်လောက် Facebook သုံး ရင်း ပြဿနာတစ်ခု တက်ကြ တယ်ဗျ။ အဲ့ ပြဿနာကလည်း အကြီးကြီးနော် .. ဂုဏ်သိက္ခာကို တော်တော် ထိခိုက်စေ
တယ်ဗျ။ အဲဒါ ဘာ ပြဿနာလည်း ဆိုတော့..ဒီလိုဗျ..ကျွန်တော်သူ
ငယ် ချင်း မိန်းကလေးတွေက သူ့
တို့လည်း Facebook သုံးတဲ့သူတွေ
လုပ်နေကြ သဘာဝအတိုင်း ဓာတ်
ပုံတွေရိုက် .. ကိုယ့် ရဲ့ Friends တွေကို tag တွေထိုး …ပုံတွေကို share ကြတာပေ့ါ… အဲသူတို့ရဲ့ ph နံပတ်တွေကိုလည်း တစ်နေရာရာမှာ share လိုက်တာတို့ …တင်လိုက်တာတို့ ..လုပ်မိတယ်ထင်တယ်ဗျ…အဲမှာစတာပဲဗျာ…
ဘယ်သူကမှန်းမသိ page တစ်ခုထောင်ပြီး ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရဲ့ ပုံတွေကို သူတို့ရဲ့ profile ကနေပြီး download လုပ် သူ့ရဲ့ page မှာတင် ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ph နံပါတ်ကိုလည်း သူ့ရဲ့ page မှာတင်ပြီး….မကောင်းတာတွေ လျှောက်လုပ်ပါလေရော…အဲဒီ့ နှမချင်းမစာနာကောင်က သူ့ရဲ့ page ကို ပြည့်တန်ဆာ page လိုမျိုး လုပ်ထား…ပြီးတော့ ကျွန်တော့် friendမိန်းကလေးရဲ့နံမည်..ဖုန်းနံပါတ်တွေ တင်…ပုံတွေတင်…လျှောက် share တော့…သေရော…ကျွန်တော့် Friend ကို ဖုန်းတွေ ဆက်ပါလေရော …တစ်နေ့ကို ဖုန်း ၁၀ ခါပဲ ဆက်ပါဦးဗျာ…ခံရတဲ့ ကာယကံရှင်က ဘယ်လိုနေမလဲ…လုပ်တဲ့သူကလည်း ဘယ်သူမှန်းမသိ…တိုင်လို့လည်းမရ…ပြီးတော့ ဆက်တဲ့ ph ကလည်း အကောင်းပြောမယ့်သူတွေ ဆက်တဲ့ ဖုန်းမဟုတ်တော့ခံရတဲ့သူက တော်တော်ခံရတယ်ဗျ…ဂုဏ်သိက္ခာလည်း တော်တော်ထိခိုက်သွားပြီ….မသိတဲ့ သူတွေကတော့ …ကျွန်တော့် firend ကို တစ်မျိုးထင်ကြတော့မယ်ဗျ…
ပြီးတော့ နောက်တစ်ခုသတိထားရမှာက Facebook မှာ account name ကို တူအောင်ပေးလို့ရတယ်ဗျ ….ဥပမာ နံမည်တစ်ခုကို ရှာလိုက်ဗျာ …အဲ့နံမည်နဲ့ account တွေအများကြီး ထွက်လာလိမ့်မယ်ဗျ.. ကဲဒီတော့ friend တို့ကို မကောင်းတာလုပ်ချင်တဲ့သူက friend တို့ နံမည်နဲ့ account လုပ်လိုက်မယ်ပဲ ထား…ပုံတွေကိုလည်း friend profile ကနေပြီး download လုပ်ပြီးပြန်ထည့်မယ်ဗျာ…ပြီးရင် အဲ့ account နဲ့ မကောင်းတဲ့ page တွေကို like လုပ်မယ်…မဟုတ်တဲ့ status တွေကိုရေးမယ်ဆိုရင်…ကဲ ဘယ်လိုလုပ်မ လဲ…ဘယ်မှလည်းတိုင်လို့မရ…ဘယ်သူမှန်းလဲမသိ…..အဲလိုမျိုးကြုံလာမှာဆိုးလို့Friendတို့ကိုသတိပေးချင် လို့ဒါလေးကို ရေးလိုက်တာပါဗျာ….ကာကွယ်ခြင်းသည်ကုသခြင်းထက်ကောင်းတယ်လို့…စကားပုံတောင်ရှိ တယ်မလား…
အဲတော့ ဒီလိုမျိုး မကြုံရအောင်..ကိုယ့်ကို Friend request လာလုပ်ထားရင် သူ့ရဲ့ profile ကို သေချာစစ် ..ဘယ်သူလဲသိမှ လက်ခံပေါ့နော်…ပြီးရင် ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုထိခိုက်နိုင်မယ့်…status တွေမတင် မိစေ နဲ့ပေါ့နော်…ဥပမာ..ဖုန်းနံပါတ်တို့ လိပ်စာတို့ပေါ့…. Chat box တွေမှာလည်း ကိုတစ်ကယ် မသိရင် မပြောတာ ကောင်းပါတယ်ဗျာ….တစ်ကယ်လို့ အဲလိုမျိုး အလုပ်ခံရမယ်ဆိုရင်…Facebook ကို report တင်လို့တော့ရတယ်ဗျ..အဲ့ account က ဒီလိုလုပ်နေပါတယ်လို့….
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကတော့ Facebook က သူ့ကို လုပ်တဲ့ account ကိုblockလုပ်ပေးလိုက် လို့ သက်သာရာရသွားတယ်… ဒါပေမယ့် အဲ့လို့မျိုး Facebook က block ပေးတာက percent တော်တော် နည်းတယ်ဗျ… ကဲ Friend တို့ တစ်ခြား Friend တွေကိုလည်း သိရအောင် share ပေးပါနော်..သတိလည်း ထားပေါ့ဗျာ..သတိထားတာမမှားပါဘူး….အားလုံးပဲ Facebook မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အန္တရာယ် ကင်းကင်း နဲ့ ပျော်မွေ့နိုင်ပါစေနော်…
Posted by TRUE STORY at 4:41 PM